Tarisa mamiriro ekunze usati wabuda neClassicWeather | Ndinobva mac
Sezvo kushata kwemamiriro ekunze kana mamiriro ekunze akanaka achisvika, zvinoenderana nedunhu repasi patinogara, zvinonyanya kuitika kuti tichazosungirwa kutarisa mamiriro ekunze tisati tabva pamba pedu kana kubasa kwedu, kuti tifunge mhando yemapfekero atinoita. kudiwa. MuMac App Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwekushandisa uye mawidget anotibvumidza kutarisa mamiriro ekunze, pamwe nekufungidzira kwemazuva anotevera, mukana wemvura ... Ino nguva tiri kutaura nezveClassicWeather, application izvo inotipa ruzivo rwakakwana nezve mamiriro ekunze enzvimbo yedu.
ClassicWeather, ine mutengo muApp Store ye3,49 euros, mutengo unopfuura wakaruramiswa kune ruzivo rwese rwarinotipa, ruzivo rwakakwana kwazvo rwatinogona kuwana mukushandisa kwemamiriro ekunze. ClassicWeather inotipa mukana wakanangana nemamiriro ekunze kuburikidza neyekushandisa icon kana kuburikidza yepamusoro menyu bar.
ClassicWeather inotipa ruzivo rwemamiriro ekunze kwemazuva gumi anotevera, pamwe neyakaenzana mvura, kunonoka nekumhanyisa kwemhepo, hunyoro, nguva iyo zuva rinobuda nekuvira, chikamu chemwedzi, chinoenderana nemaguta akati wandei mubatanidzwa. ... Ruzivo urwu rwese rwuripo kuburikidza newindo rekushandisa kana kuburikidza newidget.
Mamiriro ekunze azvino.
Kufanotaura kwemazuva gumi anotevera.
Kufungidzira kwemaawa kwemazuva gumi.
Kufanotaura kwemaawa anotevera makumi maviri nemana (+).
Kufanotaura mune zvinyorwa uye graphic fomati.
Kutungamira kwemhepo uye kumhanya.
Kupisa mumadhigirii Celsius.
Chikamu chemwedzi chazvino
Ikozvino mamiriro pane iyo Dock icon uye pane menyu bar.
Icon muDock uye / kana mune menyu bar.
2 modes: hwindo rekushandisa kana widget.
3 widget marongero ane akasiyana saizi.
Retina kuratidza inoenderana.
ClassicWeather HD12,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Tarisa mamiriro ekunze usati wabuda neClassicWeather
Apple kuvhura Downtown Brooklyn chitoro svondo rinouya